News - Ogeysiiska Ciidaha
Laga bilaabo Febraayo 11-keeda illaa Febraayo 17-keedda, waxaan u dabaaldegi doonnaa dabaaldegga Guga inta lagu jiro muddadan. Gaarsiinta deegaanka ayaa dib u bilaaban doonta Febraayo 16keeda. Gaarsiinta caalamiga ah ayaa dib u bilaaban doonta Febraayo 18. Kooxdayada saadka ayaa shaqeyn doonta Febraayo 18 sidoo kale.
Si aan u taageerno bixinta degdegga ah ee amarrada ku saabsan isla-weynaha qaraabada ah ee COVID-19 sida SARS-CoV-2 Antigen Rapid Kit, waxaan sii wadi doonnaa shaqada wax-soo-saarka heer yar. Waxaan u soo jeedineynaa macaamiisheena la qiyaasay inay si deg deg ah amar ugu siiyaan kooxdayada iibka. Waxaan ilaalin doonaa balanqaadkeena inaan bixinayno waqtigii loogu talagalay fasaxyada kadib.
Waa sanad aan caadi aheyn oo adag sanadkii lasoo dhaafay ee 2020. Iyo, dadka oo dhan waxay la halgamayaan jaceylkeena iyo geesinimadeena. Waxaan rajeyneynaa dhamaan asxaabteena qaaliga ah inay ku noolaan karaan sanad ka sii wanaagsan sanadka 2021. Aan wada shaqeyno, si aan ula dagaallano fayraska COVID-19 isla markaana aan nolosheena caadiga ah ugu guuleysanno rajo.
Iftiinka ayaa baabi'in lahaa dhammaan mugdiga. Noloshu way sii socon doontaa!
Dhamaan kuwa ugu fiican,
Waqtiga boostada: Jan-27-2021